गर्मीमा पिसाब पोल्ने समस्याबाट कसरी बच्ने ? | Hamro Doctor News
गर्मीमा पिसाब पोल्ने समस्याबाट कसरी बच्ने ?
गर्मीको समयमा कम पानी पिउने हुँदा पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ । कुनै पनि ठाउँमा जाँदा वा लामो यात्रा गर्दा पिसाब रोकिरहेको छ भने पनि पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ ।
कुनै पनि बेलामा पिसाब रोक्ने बानी गर्नुहुँदैन । पुरुषहरुलाई पनि पिसाव पोल्ने समस्या हुन्छ तर पिसाबसँगै मुत्रनलीमा पिप आयो भने त्यो यौन रोग हो तुुरुन्त जचाउँनुपर्छ । तर महिलाहरुमा पिसाब पोल्नेबित्तिकै यौन रोग भएको हुँदैन ।
पिसाबमा आएको खराबीले र पिसाबमा बढी एसिड भयो भने पिसाब पोल्ने हुन्छ । मुत्र रोगले पनि पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ त्यस्तै गर्भवती महिलाहरुलाई बढी हुन्छ ।
यौन सम्पर्कपछि पनि पिसाब पोल्छ, महिलामा पिसाब पोल्ने सँगसँगै काम ज्वरो आयो भने त्यो युटिआई भएको हो । धेरैजसो युटिआई गर्भवती हुँदा हुन्छ तर यो यौन रोग होइन । पुरुषहरुमा पिप र पिसाब आउने ठाउँ एकै हुने हुँदा नली सुक्दै जाने समस्या हुन्छ ।
त्यसैले समयमा नै सम्बन्धित चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर उपचार गर्नुपर्छ । महिलाहरुमा सेतो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, योनी चिलाउने लक्षण देखा पर्यो भने त्यो यौन रोगको लक्षण हो । गर्मी महिनामा विशेषगरी शरीरबाट पसिना आउँछ ।
शरीरको फोहोर चिज पिसाबबाट जाने हो, पसिनामा पानी धेरै गएको हुँदा पानी कम हुन्छ त्यो हुँदा पिसाब कडा हुन्छ र बढी एसिड भएर पोल्ने समस्या हुन्छ । सामान्य पिसाबमा एसिड पि.एच6हुन्छ तर त्यो भन्दा कम पिएच ४-५ भयो भने पिसाब पोल्छ ।
प्रायः पुरुषहरुले लामो यात्रामा हुँदा पनि पिसाब रोक्ने गर्दैनन् तरमहिलाहरुमा त्यस्तो हुँदैन । उनीहरु यात्रा सकिएपछि मात्रै पिसाव गर्ने गर्दछन् त कतिले पिसाब त्यसपछि पनि रोकिरहेका हुन्छन् यसले गर्दा पोल्ने हुन्छ ।
पिसाब रोक्दा कम पिसाब आउने समस्या पुरुषमा देखिन्छ। पिसाबथैलीमा नै पिसाब रोकिने सम्भावना हुन्छ यस्तो हुँदा उपचार गर्नुपर्छ । यदि उपचार समयमा नै नगर्दा विभिन्न किसिमका अन्य यौन रोगहरुको जटिलता थपिँदै जान्छ ।
यौन रोगको कारण पिसाब पोलेको हो भने पिसाब गर्ने नली नै सानो हुने हुन्छ । समयमा नै उपचार नगरे मुत्रनली साँघुरो हुँदै जान्छ । त्यस्तै पिसाब थोपा–थोपा आउने, पिसाब फेर्न गाह्रो हुने पछि वा धेरै समयसम्म पोल्ने हुन्छ । यदि उपचार गरिएन र पुरुषको नली सानो भयो भने डाइलेटेसन गरी नली ठूलो पार्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो उपचार गर्दा बिरामीलाई बेहोस बनाई गर्नुपर्छ । नली ठूलो बनाउँदा रगत जाने, धेरै दुख्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया गर्दा पनि एकदेखि दुई महिनालाई मात्र हुन्छ । दुई महिनापछि फेरी नली सानो हुँदै आउँछ त्यसैले दुई–दुई महिनामा ठूलो बनाउनुपर्छ ।
महिलाहरुमा पाठेघरमा असर गर्छ भने पुरुषमा अण्डकोष सुन्निने हुन्छ ।
गर्भ नरहने खतरा हुन्छ, यदि रह्यो भने पनि गर्भमा नै तुहिने, अंगभंग भएको बच्चा जन्मिने, छिटो वा समय नै नपुगी बच्चा जन्मिने
यौन रोगको कारण हो भने यौन सम्पर्क गर्नुहुँदैन । यदि गरे पनि विश्वासिलो एक पात्रसँग मात्रै गर्नुपर्छ । रोग देखिनासाथ उपचार गर्नुपर्छ । मलाई पिसाब पोलेको छ भनेर फार्मेसी वा औषधि पसलमा गएर औषधि खाएर कम त हुन्छ तर त्यो गर्नुहुँदैन ।
यसको उपचारको लागि प्रमुख भनेकै पानी बढी पिउने हो, त्यसैले पानी कम गर्नुहँदैन ।
Last modified on 2019-06-13 12:17:27